बच्चालाई ज्वरो आउँदा के गर्ने, के नगर्ने ? - Baikalpikkhabar
बच्चालाई ज्वरो आउँदा के गर्ने, के नगर्ने ?
शिशुलाई ज्वरो आउँदा अभिभावक पनि शारीरिक र मानसिक रुपमा पीडित हुन्छन्। तर, ज्वरो संक्रमणविरुद्ध जुध्ने शरीरको आफ्नै तरिका हो। कतिपय अवस्थामा ज्वरो एक भाइरल संक्रमण हो, जुन बिस्तारै निको हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि बच्चालाई उपचार र हेरचाहको आवश्यकतै छैन। शिशुलाई उच्च ज्वरो आउँदा निम्न विषयमा बिचार पुर्‍याउनुपर्छ:
एन्टिबायोटिक दिन हतार नगर्ने: हो, कतिपय अवस्थामा १०१, १०२, १०३ डिग्री ज्वरो आएका बालबालिकालाई पनि एन्टिबायोटिक आवश्यकता पर्दैन। सामान्य प्यारासिटामोल सिरप खुवाएर पनि ज्वरो घटाउन सकिन्छ। ब्याक्टेरियाको संक्रमणले ज्वरो आएको चिकित्सकले पहिचान गरेपछि मात्र एन्टिबायोटिक दिइन्छ।
हातको विशेष सरसफाइ गर्नेः संक्रमणलाई न्यून गर्न पनि बारम्बार बिरामीको हात मनतातो पानीले धोइदिनुपर्छ। खाना खानुअगाडि र पछि एन्टिसेप्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ।
सधैँ ताजा खानेकुरा खान दिने: फलफूल, घरमै बनाएको फलफूलको जुस, घरमै बनाएको अन्य खानेकुरा खुवाउँदा बच्चाको प्रतिरोधी क्षमता राम्रो हुन्छ। ज्वरोसँगै बच्चालाई वान्ता र पखाला लागेको छ भने उसलाई जबर्जस्ती नखुवाउने। बरु झोलिलो कुरा र पानी पिउन दिने। फलफूलको जुस र पानीले डिहाइड्रेसनबाट बचाउछ। बच्चाको खानेकुरामा प्रशस्त सागसब्जी (प्रोबायोटिक डाइट) समावेश गर्ने। यसले पाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्नुका साथै प्रतिरोध क्षमतालाई सुधार्छ।
शरीरको तापक्रम घटाउन मनतातो पानी वा चिसो पानीमा नरम लुगा भिजाएर टाउको र पाइतालामा राखिदिने। तापक्रम बढ्नेबित्तिकै यो प्रक्रियालाई दोहोर्‍याउन सकिन्छ।
बच्चाले पिसाब गरेको छ, छैन भन्ने ख्याल गर्ने। ज्वरो आउँदा बच्चाले पाँच, ६ घन्टासम्म पनि पिसाब फेरेको छैन भने उसलाई डिहाइड्रेसन भएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अस्पताल लैजानु पर्छ।
वान्ता गरेपछि तरल वा अन्य कुनै खानेकुरा खान नदिनुहोस्। कुनै खानेकुरा वा जुस दिनुअगाडि वान्ता गरेपछि कम्तीमा ३० मिनेट पछि मात्र फेरी खुवाउने। बच्चाको ज्वरो तीन दिनसम्म पनि घटेन र दिनमा पाँचपटकसम्म वान्ता गरेमा तपाईंले बाल विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ। अभिभावकको शान्त स्वभावले पनि बच्चालाई छिटो निको हुन सजिलो बनाउँछ।
आइतबार, १३ भदौ, २०७८, दिउँसोको ०२:१५ बजे
प्रदेश १ मा १७९ जनामा कोरोना संक्रमण, ओरालो लाग्दै कोरोना संक्रमित
दमक, १० असोज / प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा १७९ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । ६६९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १६१ र १२२ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १८ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा २४ घण्टामा ३२२ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितभन्दा निको हुने बढी
दमक, ९ असोज/ प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ३२२ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । ७२५ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १६९ र ६१४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १५३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका
अमेरिकामा एकै दिन सवा लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए
एजेन्सी / अमेरिकामा एकै दिन सवा लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार त्यहाँ २४ घण्टाको अवधिमा १ लाख १५ हजार ६५६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अमेरिकामा अघिल्लो दिन मात्रै १ लाख ३० हजारभन्दा धेरैमा संक्रमण पाइएको थियो।
चिया बगानका मजदुरलाई एस्ट्राजेनिकको खोप
दमक ,८ असोज / मेचीनगरस्थित चिया बगानमा कार्यरत ७८७ मजदुरलाई स्वाथ्यकर्मीले कारखानामै पुगेर कोभिडविरुद्धको खोप लगाइदिएका छन् । मेचीनगर नगरपालिका–८ मा रहेको टोकला बगानका ३६८ र वडा नम्बर ६ र ७ को सतिघट्टा चिया बगानका ४१९ मजदुरलाई एस्ट्राजेनिकको खोपको पहिलो
प्रदेश १ मा २४ घण्टामा ३२४ जनामा कोरोना संक्रमण
दमक, ८ असोज/ प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ३२४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । ९५८ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २११ र ६०४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ११३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका
सेतो पुतलीबाट बालबालिकाहरु जोखिममा
दमक, ८ असोज/ सेतो पुतलीबाट मानिसको आखामा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम रोकथाम गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक चासो दिएको छैन । नेपालका पहाडी क्षेत्रमा सेतो पुतलीका कारण आँखाको ज्योती गुमाउन परिरहेको तर्फ सचेत हुँदै त्यसको रोकथामका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारसँग आवश्यक तयारी
दसैँको फूलपातीबाट सिनेमा घर खुल्ने
असोज ११ / चलचित्रकर्मीले दसैँको फूलपातीबाट सिनेमा घर...
दमक, १० असोज / प्रदेश १ मा पछिल्लो...
कानेपोखरीका सबैवडामा माओवादीको भेला सम्पन्न
दमक, १० असोज/ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)...